२५ बर्षिया छोरीले किन गरिन आफ्नै बाबुकाे ह’त्या? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/२५ बर्षिया छोरीले किन गरिन आफ्नै बाबुकाे ह’त्या?
इलाममा गए राति एक युवतीले आफ्नै बुबाको ह’त्या गरेकी छन् । इलाम देउमाई नगरपालिका–६ शान्तिडाँडाकी सुष्मा राईले बुबा फुलबहादुर राईको ह’त्या गरेकी हुन् ।शान्तिडाँडाको गोरेडाँडा निवासी ५२ वर्षीय बुबा फुलबहादुरको करिब २५ वर्षीया छोरी सुष्माबीच झ’गडा भइरहने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ उद्धृत गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय मङ्गलबारेका प्रहरी निरीक्षक राजकिशोर शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रातको समयमा झ’गडा हुँदा छोरीले नै ह’त्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
घरमा जेठी छोरी सुष्मा साथै उनका बुबा र आमा मात्र रहेको अवस्थामा राति खाना खाइसकेपछि पनि झ’गडा भएको थियो । फुलबहादुरको टाउकोमा चो’ट देखिएको छ । टाउकोमा चिर्पट प्र’हार गरेर ह’त्या गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
“गहिरो चो’ट नदेखिएका कारण धा’रिलो ह’तिया’र प्रयोग नभएको हो कि जस्तो छ, अनुसन्धान भइरहेको छ”, प्रहरी निरीक्षक शाहले भन्नुभयो । कान्छी छोरी र ज्वाइँसमेत शान्तिडाँडा घरमा आएको र हिजो दिउँसो पनि झ’गडा भएपछि गाउँमा सुत्न गएको बताइएको छ ।घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । छोरी सुष्मा बेलुकैबाट फ’रार रहेकाले खोजीकार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
तनहुँमा जन्मियो चारवटै खुट्टा नभएको बाच्छो